Warshadaha Xulashada Shiinaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Dhibaato ma ku qabtaa inaad u hesho hadiyad wax ku ool ah macaamiishaada? Taliyayaasha shaqsiga ah ayaa ah hadiyadaha ugu fiican oo ay u adeegsan karaan nolol maalmeedka.
Dhibaato ma ku qabtaa inaad u hesho hadiyad wax ku ool ah macaamiishaada? Taliyayaasha shaqsiga ah waa hadiyado kaamil ah oo loo isticmaali karo nolol maalmeedka.
Pretty Shiny wuxuu siiyaa agabyada dugsiga ee kala duwan, xafiisyada xafiisyada oo ay ku jiraan taliyayaasha. Taliyuhu waa mid waara, la isku hallayn karo. Iyada oo naqshado si sax ah loogu daabacay labada inji iyo sintimitir, waxaa kuu habboon in aad doorato mid ka mid ah miisaanka aad isticmaalayso oo u istaagi doona baahida adeegsiga maalin kasta.
Waxaan bixinnaa alwaax, caag ah iyo taliyayaasha silikoonmidabbo kala duwan leh, markaa waxaad dooran kartaa taliye ku habboon si kor loogu qaado astaantaada! Haddii aad rabto wax intaas ka sii badan, gaar ah ama aad raadinayso inaad iibsato taliyayaasha gaarka ah, waxaad xor u tahay inaad farriin noogu soo dirto codsiyadaada.
Astaamaha waxaa ka mid ah:
Waxyaabaha: PVC, silikoon, PP, ABS, ABS+AS, PET, bir, alwaax iwm
Waxaa lagu daabacay labada inji iyo sintimitir, calaamado cad oo loogu talagalay cabbirkaaga habboon
Aalad cabbir oo siman oo siman oo wanaagsan, ayaa ku siinaysa khibrad adeegsi oo wanaagsan
Codsiyo balaadhan, oo ku habboon guriga, isticmaalka xafiiska, gaar ahaan ardayda dugsiga iyo macallimiinta
Qiimaha Tartanka, Muunado Bilaash ah, Naqshad Farshaxan oo Bilaash ah
Xiga: Buugga Xusuus -qorka & Qoraallada Dhegdheg
taliyayaal caadadii daabacan
Taliyayaasha shaqsiga ah
taliyayaal caag ah
taliyayaal alwaax ah